Arch Linux na-enye ndị ọrụ gị niile aka ịma | Site na Linux
Iwu maka Arch Linux na ndị ọrụ gị niile kwesịrị ịma
Luigys toro | | GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ọ bụ ezie na m na-ejikarị console ahụ eme ihe, ana m ekwupụta na amachaghị m iburu iwu n'isi, m na-eji "mpempe akwụkwọ aghụghọ" eme ihe ebe m dere ọtụtụ iwu m na-achọkarị na n'ọnọdụ ụfọdụ anaghị m echeta. Nke a abụghị ma ọ bụ ụzọ kachasị mma iji nweta iwu anyị chọrọ n'aka, mana ọ bụ nke m na-eji ma ọ na-arụrụ m ọrụ.
Ugbu a, enwere m obi ụtọ Manjaro KDE (Gịnị bụ Arch Linux dabeere na distro), ọ dị m ka ọ na-atọ m ụtọ ịchịkọta iwu ndị a na-ejikarị na Arch Linux na ndị ọzọ na-anaghị eji ọtụtụ ihe mana ha nwere ezigbo ụlọ ọrụ.
Ọ dị mma ịmara na ụzọ kachasị mma iji mata iwu maka Arch Linux bụ Wiki nke distro n'onwe ya, ebe enwere ozi zuru oke ma zuru oke maka iwu ọ bụla. Nchikota a abughi ihe ozo karia ntuziaka ngwa ngwa, iji tinye aka na iwu obula (ojiji ya, uru ya, ihe ndi ozo) anyi na akwadoro iga Arch Linux Wiki.
1 Pacman na Yaourt: iwu 2 dị mkpa maka Arch Linux
2 Iwu eji eme ihe na Linux
Pacman na Yaourt: iwu 2 dị mkpa maka Arch Linux
Pacman y Yaourt mee Arch Linux otu n'ime nsogbu kacha mma dị taa, site na ha anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ puku nchịkọta na mmemme dịnụ iji wụnye iwu ndị a. N'otu ụzọ ahụ, ngwaọrụ abụọ a na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ ka ịmụ otu esi eji ya dị oke mfe.
Pacman bụ Arch Linux nke ndabara ngwugwu njikwa, ka ọ dị ugbu a Yaourt bụ ihe mkpuchi nke na-enye anyị ohere ịbanye na ebe nchekwa obodo AUR, ebe anyị nwere ike ịnweta otu katalọgụ ngwugwu jikọtara taa dị.
Ihe bụ isi nke Pacman na Yaourt nyere iwu ka anyị mara bụ ihe ndị a, anyị ga-achịkọta ya site na ihe ha na-eme, ị nwere ike ịhụ myirịta nke iwu ahụ, n'otu ụzọ ahụ, gosipụta na pacman na-egbu ya na sudo na maka yaourt adịghị mkpa.
sudo pacman -Syu // Melite sistemu yaourt -Syu // Melite sistemu yaourt -Syua // Melite sistemu na mgbakwunye na ngwugwu AUR sudo pacman -Sy // Mekọrịta nchịkọta site na nchekwa data yaourt -Sy // Mekọrịta nchịkọta si nchekwa data sudo pacman -Syy // Mmekọrịta mmekọrịta nke nchịkọta site na nchekwa data yaourt -Syy // Mee mmekọrịta nke ngwugwu site na nchekwa data sudo pacman -Ss ngwugwu // Na-enye ohere ịchọ ngwugwu na repositories yaourt -Ss ngwugwu // Na-enye ohere ịchọ ngwugwu na repositories sudo pacman -Yes ngwugwu // Nweta ozi site na ngwugwu nke dị na repositories yaourt -Yes ngwugwu // Nweta ozi site na ngwungwu nke dị na repositories sudo pacman -Qi ngwugwu // Gosi ozi nke ngwugwu arụnyere yaourt -Qi ngwugwu // Gosi ozi nke ngwugwu arụnyere sudo pacman -S ngwugwu // Wụnye na / ma ọ bụ melite ngwugwu yaourt -S ngwugwu // Wụnye na / ma ọ bụ melite ngwugwu sudo pacman -R ngwugwu // Wepu ngwugwu yaourt -R ngwugwu // Wepu ngwugwu sudo pacman -U / uzo / to / the / ngwugwu // Wụnye mpaghara ngwugwu yaourt -U / uzo / to / the / ngwugwu // Wụnye ngwugwu sudo pacman -Scc // Wepu ngwugwu ngwugwu yaourt -Scc // Kọwaa ngwugwu ngwugwu sudo pacman -Rc ngwugwu // Wepu ngwugwu na ịdabere yaourt -Rc ngwugwu // Wepu ngwugwu na ndị na-adabere na ya sudo pacman -Rnsc ngwugwu // Wepu ngwugwu, ya dependencies na ntọala yaourt -Rnsc ngwugwu // Wepu ngwugwu, ihe ndabere ya na ntọala ya sudo pacman -Qdt // Gosi nchịkọta ụmụ mgbei yaourt -Qdt // Gosi ngwungwu ụmụ mgbei
Iwu eji eme ihe na Linux
Ugbua gara aga, ebipụtara ya ebe a Ndokwa onyogho nke anyi g’eji wuru cube, nke mere ka anyi nwee iwu Arch Linux n’aka, onyonyo a gunyere ihe ndi ozo nyere n’iwu anyi choro isoro gi.
Isi mmalite: elblogdepicodev
Nwere ike ịgbakwunye iwu ndị a site na nduzi emere n'oge gara aga, yana Karịrị 400 iwu maka GNU / Linux na ị kwesịrị ịma 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Iwu maka Arch Linux na ndị ọrụ gị niile kwesịrị ịma
Ọ dị ezigbo mma. Ọ na-agbara m ọsọ maka Arch nke m nwere na net net na nkewa m nwere na Parabola GNU / Linux-libre na desktọọpụ PC.
ihe omuma a nile di na archlinux wikipedia. : /
M na-aguputa verbatim ihe m dere na edemede:
«Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ụzọ kachasị mma iji mata iwu maka Arch Linux bụ Wiki nke distro n'onwe ya, ebe enwere ozi zuru oke ma zuru oke maka iwu ọ bụla. Nchịkọta a abụghị naanị ntụzịaka ntụzịaka ngwa ngwa, iji mee ka iwu ọ bụla mikwuo emi (ojiji, ịba uru, nkọwapụta, n'etiti ndị ọzọ)
Agbanyeghị, ha kwesịrị imekwu ederede maka ArchUsers.
More na m ikpe mgbe ọ kwụsịrị omume: /
Enwere m ọtụtụ vidiyo na ọwa YouTube m na blọọgụ m https://archlinuxlatinoamerica.wordpress.com ???
I chefuru onye kacha mma iji melite:
yaourt -Your -noconfirm
Anyị na-echeta Suya na Spanish karịa Syua na usoro nke oke anaghị agbanwe, na nke a, nsonaazụ
Banyere noconfirm ahụ, maka ihe emelitere site na AUR ọ bụ mpịakọta nkwenye ọ na-arịọ maka, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ probón, ma si otú a chekwaa ha.
Lizard, enweela m nwayọ nwayọ na ntanetị na Arch ruo ọtụtụ ọnwa mana n'ihe banyere Mageia ọ na-arụ ọrụ zuru oke, abanyebeghị m na ndekọ ahụ wee jiri eziokwu ahụ bụ na enwere m akwa mmiri ga-amasị m ịhụ etu m ga-esi mezie ya.
Somethingdị ihe a ọ mere gị?
Ndo ma ọ bụrụ na nke a emebi iwu ọ bụla.
etinye oyiyi cube na oke mma
Aha ya bụ Lucy dijo
Ndewo, gbaghara m amaghị ama, mana enwere m ajụjụ dị mkpa: M na-eji Arch ụbọchị 3, enwere m buut abụọ yana sistemụ arụmọrụ ọzọ. Enwere m mmasị na distro ahụ, mana m na-abanye n'ime nsogbu: enweghị m ike ịwụnye yaourt (nke mbụ m tinyeworị isi-devel arụnyere), m gbanwere pacman.conf site na iji nano wee gbakwunye repo
SigLevel = Ọ dịghị mgbe
Sava = http://repo.archlinux.fr/$arch
Agbanyeghị m nwetara njehie: njehie: enweghị ike ịnweta faịlụ "archlinuxfr.db" site na repo.archlinux.fr: Ọrụ kwa nwayọ. Erughị 1 bytes / sec zigara 10 sekọnd ikpeazụ
njehie: okpu imelite archlinuxfr (budata okike oba akwukwo)
Agbalịrị ịhapụ SigLevel = Nhọrọ TrustAll, naanị maka ule. Ọsọ intaneti zuru oke, nkwụghachi nke ọzọ anaghị enye m nsogbu, enwere m ike ịchọgharị ma ọ bụ budata na ọsọ m natara.
Ajuju m bu ma oburu na ndue a ka di ma obu na m kwesiri ibudata yaourt ozugbo site na AUR ma chikota ya.
Ekele m na nwute ma ọ bụrụ na ajụjụ a bụ nzuzu, mana m na-ekwughachi, naanị m nọrọ Arch maka ụbọchị 3.
Mgbe ịtinye mgbakwunye na ịchekwa, wụnye yaourt:
Obi oma, achoro m ka enyemaka gi na ajuju, na Arch, ma obu nwa gi Antergos nke bu ihe m ji eme ihe, odi nkpa ma obu kwe omume megharia ndi okacha amara nke kaadi vidiyo dika esi eme ya na distros dika Ubuntu? Ọ bụrụ na enwere ike, ị nwere ike inye m aka na-akọwa otu esi eme ya?
Capitaine cursors: Otu mkpọ cursors sitere n'ike mmụọ nsọ nke macOS ma dabere na KDE Breeze
Etu esi wụnye Office Online na Ubuntu 16.04